Wednesday April 11, 2018 - 19:18:05 in Wararka by Super Admin
Warar lagu baahiyey baraha Bulshada ayaa ku warramaya in Khaliif xaftar maskaxda uu dhiig uga furmay kadibna loola cararay dhankaa iyo wadanka Urdun markii wax looga qaban waayana loosii gudbiyey wadanka Faransiiska oo halkaas oo lagula tacaalayo xaaladdiisa caafimaad.
Warbaahinta maxalliga ah oo soo xiganeysa ila ku dhow dhow madaxweynaha ayaa sheegeysa in warkaas uu sax yahay, laakin saraakiil ka tirsan xukuumadda ayaa dafiray arrintan waxa ayna leeyihiin madaxweynuhu wuu bed qabaa wxuuna ku mashquulsan yahay diyaarinta werar lagu qaado magaalada Darnah oo kamid ah magaalooyinka dhaca Bariga wadanka liibiya kana maqan gacanta Khaliif Xaftar.
Dagaal Ooge Khaliif xaftar ayaan muddo ku dhow 20 maalmood aan kasoo muuqan warbaahinta, muuqaalkiisi ugu dammbeeyana waxa uu ahaa 26 bishii lasoo dhaafay kulan uu la qaatay safiirka Ingiriiska ufadhiya Liibiya Frank Beker wuxuuna kulankaas ka dhacay Mandiqada Rajmah oo 15 KM ujirto magalada Bangazi oo ah xarunta Dowlladdiisa.
Jeneraal Xiftar oo 75 sano jir ah ayaa kamid ahaa saraakiishii ciidanka Mucamar Alqadaafi balse markii kacdoon lagu riday Nidaamkii Qadaafi ayuu Bariga Liibiya ka abaabulay Maleeshiyaad qaab ashahaadda ladirir ah u abaabulan kuwaas oo xasuuq daran ugeystay shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka Barqah.
Xiftar oo Taageero ka helaya dowladaha Faransiisk,Imaaraatka Sacuudiga iyo Masar ayaa gummaad arxan darra ah ugeystay dadka shacab ah isagoo ku marmarsiyoonaya la dagaallanka waxa Argagaxisada loogu yeero, Maxamuud Al-Warfalli oo ah taliyaha ciidanka Xiftar ayay maxkamadda ICC amar ku bixisay in lasoo xiro wuxuuna ku eedeysanyahay dambiyo dagaal.
Kumanaan qof oo kasoo jeeda magaalada Banghaazi ayuu Xiftar Xasuuq jamaaci ah ugeystay, deegaanno badan oo Bariga Liibiya dhaca waxaa kuyaal xabaal wadareedyo lagu aasay dadkii maleeshiyaadka Xiftar Gummaadeen.